Miisaaniyad la siinayo maamul goboleedyada dalka oo sharci darro lagu tilmaamay – Balcad.com Teyteyleey
Miisaaniyadda ay diyaarisay Wasaaradda maaliyadda Dowladda Federaalka Soomaaliya mudada lixda bilood ah ee soo socota oo loo gudbiyay Golaha baarlamaanka ayaa sharci darro lagu tilmaamay lacago loo qoondeeyay maamul goboleedyada dalka ka jira.
Qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka ayaa sheegay in lacagahaasi aanay caddeynin Wasaaradda Maaliyadda ujeedada loo siinayo maamul goboleedyada federaaliga ah, waxayna in sidoo kale ay sharci darro tahay kala sareynta kala sareynta dhaqaalaha la siinayo dowlad goboleedyada.
“Maamulka K/Galbeed oo ay degan yihiin dadka ugu badan waxaa la siinayaa hal Milyan Dollar, maamul goboleed kale oo dadka degan ka tiro yihiina waxaa la siinayaa afar Milyan Dollar ma aha wax sharci ah” ayuu yiri Xildhibaan C/raxmaan Xaaji Maxamuud Ibbi oo sheegay in dhaqaalaha loo badinayo maamul goboleedyada leh Dekedaha iyo Garoomada Diyaaradaha.
Xildhibaano kale oo ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ayaa iyaguna waxay aragtidooda ku biiriyeen miisaaniyadda uu soo saaray Wasiirka maaliyadda C/raxmaan Beyle, iyagoona sheegay in lacago loo qoondeeyay rugta ganacsiga Soomaaliya ay tahay mid u baahan in looga doodo kalfadhiga Baarlamaanka.
Lacagaha la siinayo rugta Ganacsiga ayay sheegeen inay tahay mid dano gaar ah oo aan sharci ahayn laga leeyahay, maadaama dhaqaalaha laga qaado ganacsatada la siinayo ganacsato kale iyagoona sheegay inay ugu celinayaan Wasaaradda maaliyadda miisaaniyadda lixda bilood ah ee ay soo hor dhigtay Golaha Baarlamaanka.
Dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka oo loo qeybiyay nuqullada shaxda miisaaniyadda lixda bilood si ay u akhistaan ayaa la filayaa inay maanta uga doodaan Golaha Baarlamaanka, halkaasi oo Wasiirka Maaliyadda u jeedinayo khudbad ku saabsan maasiinayadaan muranka dhalisay.
The post Miisaaniyad la siinayo maamul goboleedyada dalka oo sharci darro lagu tilmaamay appeared first on Ilwareed Online.
DEGDEG: Mas’uuliyiin ka tirsan Galmudug oo Isbitaal loo la cararay (Dhageyso)